घर > पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ)
कफटेक एक पेशेवर कम्पनी हो जुन २०१२ देखि बजारमा रहेको छ र यसको उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरूका लागि परिचित छ। यसका बारे सबै भन्दा राम्रो कुरा पूरै त्यो यो ग्लुटन-रहित छ र कुनै साधारण एलर्जीनहरू समावेश गर्दैन। यसैले, विभिन्न प्रकारका एलर्जीको लागि संवेदनशील व्यक्तिहरूले उनीहरूको मनको शान्ति गुमाए बिना यो पूरक लिन सक्छन्। Cofttek PQQ पूरक एक उत्तम हो पाइरोलोक्विनोलिन क्विनोन बजारमा हाल पूरकहरू उपलब्ध छन्। यदि तपाईं शाकाहारी विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी PQQ ऊर्जा पूरक खरीद गर्न सिफारिस गर्दछौं Cofttek.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) के हो?
Pyrroloquinoline quinone के गर्छ?
तपाईले दैनिक कति PQQ लिनु पर्छ?
मैले CoQ10 बिहान वा रात कहिले लिने?
CoQ10 मा Q को अर्थ के हो?
कसरी माइटोकन्ड्रिया पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ?
के CoQ10 यसमा क्विनाइन छ?
किन उनीहरूले बजारबाट कुइनाइन लिए?
Coenzyme Q10 को उत्तम रूप के हो?
Co Q 10 शरीरको लागि के गर्छ?
के PQQ ले रगत दिमाग अवरोध पार गर्दछ?
हामीलाई पायरोलोकोइनोलिन क्विनोन (PQQ) किन आवश्यक छ?
तपाईं mitochondria बढाउन सक्नुहुन्छ?
PQQ quinine छ?
कुइनाइन प्राकृतिक रूपमा के पाइन्छ?
Pyrroloquinoline Quinone Dismod salt (PQQ) को मतलब के हो?
CoQ10 र ubiquinol बीचको भिन्नता के हो?
के PQQ सुरक्षित छ?
के PQQ CoQ10 भन्दा राम्रो छ?
कति CoQ 10 लिनु पर्छ?
के CoQ10 ले रगतको थक्वाहरू निम्त्याउँछ?
Q10 किन महँगो छ?
CoQ10 ले काम गर्न कति समय लिन्छ?
CoQ10 लिनका साइड इफेक्टहरू के छन्?
Pyrroloquinoline quinone quinine जस्तै छ?
PQQ मुटुको लागि राम्रो छ?
के तपाई गर्भवती भएको बेला PQQ लिन सक्नुहुन्छ?
के PQQ मधुमेह रोगीहरूको लागि सुरक्षित छ?
तपाईं कसरी mitochondria उर्जा गर्नुहुन्छ?
PQQ antioxidant के हो?
भिटामिन PQQ के हो?
PQQ २० के हो?
कुन खानामा PQQ हुन्छ?
कस्ता खानाले माइटोकन्ड्रियालाई बढाउँछ?
के उपवासले माइटोकन्ड्रियालाई बढाउँदछ?
मिटोकोन्ड्रियालाई कुन व्यायामले बढाउँछ?
के तपाई बिग्रिएको मिटोकोन्ड्रिया मर्मत गर्न सक्नुहुन्छ?
कुन पूरक पदार्थले mitochondria बढाउँछ?
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) उपयोग।
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) लाभहरू।
कहाँ थोक मा Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) पाउडर खरीद गर्ने?
पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन वा पीक्यूक्यू यौगिक हो जुन बोटबिरुवामा पाइन्छ साथै धेरै ब्याक्टेरियाहरू र एकल-सेल युकेरियोट्स, जस्तै खमीरमा। पीक्यूक्यू मानव आमाको दुधमा प्राकृतिक रूपमा अवस्थित छ साथ साथै किण्वित सोयाबीन, किवी, पपीता, पालक, अजमोद, ओलोong्ग, हरी मिर्च र हरियो चियामा। जनावरहरूमा गरिएको अनुसन्धानले अपर्याप्त पीक्यूक्यू वा पीक्यूक्यू अभावलाई एक सम्झौता प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, वृद्धि कमजोरी, असामान्य प्रजनन प्रदर्शन र कम चयापचय लचिलोपनसँग जोडेको छ।
धेरै वर्षसम्म, अन्वेषकहरूले पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) भिटामिनको एक प्रकार हो। यद्यपि विगत केहि बर्षमा गरिएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन भिटामिनजस्ता गुणहरू भएको पोषक तत्व हो जसले घटाउने अक्सिडेसन प्रक्रियामा सह-कारक वा एन्जाइम बूस्टरको रूपमा कार्य गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ जसमा दुई बीच इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर समावेश छ। प्रजाति। सरल शब्दहरुमा, PQQ ले शरीरमा क्विनोप्रोटीन्सको साथ बाँध्छ र स्वतन्त्र रेडिकलबाट छुटकारा पाउनको लागि उनीहरूसँग मिलेर काम गर्दछ। एक अनुसन्धान अध्ययनले क्विनोप्रोटीनलाई एन्टि-अक्सिडेन्टको रूपमा भिटामिन - सी भन्दा १०० गुणा बढी प्रभावकारी फेला पारे। भर्खरका अध्ययनहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि PQQ ले शरीरको माईटोक्न्ड्रियाको कुल संख्या बढाउँदै उर्जा हस्तान्तरण र सेलुलर मेटाबोलिजमलाई असर गर्छ। यो यी महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हो जुन भर्खरका बर्षहरूमा पाइरोलोक्विनोलिन क्विनोनको लोकप्रियतामा अचानक वृद्धि भएको छ।
बोटको वृद्धि कारक र ब्याक्टेरियाको कोफेक्टर हुनुको साथै पाइरोलोक्विनोलिन क्विनोन (पीक्यूक्यू) माइटोकन्ड्रियालाई अक्सिडेटिभ तनावबाट जोगाउँदछ र माइटोकन्ड्रिओगेनेसिसलाई बढावा दिन्छ।
अहिले सम्म कुनै माथिल्लो वा तल्लो सीमा स्थापना भएको छैन पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) खुराक यद्यपि पशु अध्ययनबाट पत्ता लगाइएको नतिजाले पत्ता लगायो कि यो कम्पाउन्ड बायोएक्टिभ हुन्छ जब २ मिलीग्रामभन्दा कम खुराक लिईन्छ। जहाँसम्म, यी दिनहरूमा प्रायः आहार पूरकहरू २० मिलीग्रामदेखि mg० मिलीग्रामको दायरामा उपलब्ध छन्, जुन एक सुरक्षित दायरा मानिन्छ। PQQ अधिकतर क्याप्सुलको रूपमा उपलब्ध छ, जुन मानिसहरूलाई खाली पेट लिन सल्लाह दिइन्छ। यद्यपि प्रयोगकर्ताहरूलाई दिनको mg० मिलीग्राम डोज भन्दा बाहिर नजाउन सल्लाह दिइन्छ।
यो नोट गर्नुपर्दछ कि CoQ10 लाई सुत्ने समयको नजिकमा लिनु केही व्यक्तिहरूमा अनिद्राको कारण हुन सक्छ, त्यसैले यसलाई बिहान वा दिउँसो लिनु राम्रो हुन्छ ()१)। CoQ41 पूरकहरूले केहि सामान्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ, रगत पातलो, एन्टीडिप्रेससन्ट र कीमोथेरापी ड्रगहरू सहित।
Coenzyme Q10 (CoQ10) एक antioxidant हो जुन तपाईंको शरीरले स्वाभाविक रूपमा उत्पादन गर्दछ। तपाईंको कक्षहरू विकास र मर्मतका लागि CoQ10 प्रयोग गर्दछ।
उत्तेजनाको प्रतिक्रियामा, माइटोकोन्ड्रिया वातावरणमा अनुकूल हुन फ्यूजन / विखंडन चक्रबाट गुजरन्छ। यसरी न्यूरोनल पुनर्जन्मका लागि माइटोकन्ड्रियल डायनेमिक्सको प्लास्टिसिटी आवश्यक छ भनेर अनुमान गर्नु तर्कसंगत छ।
Coenzyme Q10 ubiquinones भनिने पदार्थको परिवारसँग सम्बन्धित छ जुन संरचनात्मक रूपमा रासायनिक कु्विनाइनसँग सम्बन्धित छ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई क्विनाइनबाट एलर्जी छ भने, तपाईंले CoQ10 बाट दैनिक पूरक सुरु गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नुपर्छ।
यु एस फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ले क्विनाइन युक्त अप्रमाणित औषधि उत्पादनहरू हटाउने आदेश दिएका छन्, सुरक्षाको गम्भीर चिन्ता र उनीहरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित मृत्युलाई उल्लेख गर्दै। कार्य बजारबाट सबै असुरक्षित, अनुमोदन नभएका औषधिहरू हटाउन ठूलो प्रयासको एक हिस्सा हो।
Ubiquinol रगतमा CoQ90 को 10% हो र यो सबैभन्दा अवशोषित रूप हो। यसैले, यो ubiquinol फारम समावेश सप्लिमेन्टहरूबाट छनौट गर्न सिफारिस गरिन्छ।
CoQ10 लाई हृदयको स्वास्थ्य र रगतमा चिनी रेगुलेसन सुधार गर्न, क्यान्सरको रोकथाम र उपचारमा मद्दत गर्न र माइग्रेनको आवृत्ति कम गर्न देखाइएको छ। यसले अक्सिडेटिभ क्षतिलाई पनि कम गर्न सक्छ जुन स्नायु थकान, छालाको क्षति र मस्तिष्क र फोक्सोको रोग निम्त्याउँछ।
सार पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (पीक्यूक्यू), अन्यथा मेथोक्साटिन भनेर चिनिन्छ, पानीमा घुलनशील, रेडॉक्स-साइक्लि or ओर्थोक्विनोन हो जुन सुरुमा मेथाइलोट्रपिक ब्याक्टेरियाको संस्कृतिबाट पृथक गरिएको थियो। ... यस्तो देखिन्छ कि सम्पूर्ण जनावरमा, PQQ ले रगत-दिमाग अवरोध पार गर्दैन।
व्यक्तिहरूको उमेरका रूपमा, तिनीहरूको मस्तिष्क क्षतिको धेरै स्रोतहरूसँग लड्न बाध्य हुन्छ। जबकि क्षतिको केही स्रोतहरूले शून्य देखि मानव मस्तिष्कमा न्यूनतम प्रभाव दर्ता गर्दछ, केही क्षतिहरू न्यूरोडोजेरेरेटिव डिसअर्डरहरू र रक्तवाहिकाहरूलाई असर गर्ने प्रगतिशील चोटहरूको सहयोगी कारक बन्छन्। हालसालैका वर्षहरूमा मानिस मस्तिष्कको स्वास्थ्यको बारेमा बढी चिन्तित भएका छन् र यसैले अनुसन्धानका साथै मस्तिष्कको कार्य र स्वास्थ्यको बारेमा पनि सचेतना एकदम गहन भएको छ। अन्वेषकहरूले निरन्तर अध्ययन र मानव मस्तिष्कको स्वास्थ्य मा विभिन्न रसायन र यौगिकहरु को प्रभाव विश्लेषण विश्लेषण गर्न। विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताहरु र वैज्ञानिकहरुको चासो जगाउन सक्ने यस्तै एक यौगिक भनेको पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) हो। यस लेखमा हामी पायरोरोक्विनोलिन क्विनोनको बारेमा थाहा पाउन त्यहाँ सबै कुरा गर्छौं, यसका कार्यहरू, फाइदाहरू, डोज सीमाहरू र साइड इफेक्ट सहित। त्यसोभए, पढ्नुहोस्।
विष एक्सपोजर कम गर्नुहोस्। मिटोकन्ड्रियालाई अक्सिडेटिभ तनावबाट जोगाउने पोषकहरू प्रदान गर्नुहोस्
मिटोकन्ड्रियल एटीपी उत्पादनलाई सजिलो बनाउने पोषकहरूको प्रयोग गर्नुहोस्।
शारीरिक व्यायाम नै तपाईको अक्सिजन सेवन बढाउने उत्तम तरिका हो, मिटोचन्ड्रियाको क्रेब्स चक्रको लागि महत्वपूर्ण। तपाईंको शरीरले अधिक ऊर्जा प्रयोग गर्दछ, यसले आफैंलाई बढि mitochondria उत्पादन गर्न बाध्य पार्छ मागको साथ राख्नको लागि।
पायरोलोक्विनोलिन कुन्निन, जसलाई पीक्यूक्यू पनि भनिन्छ, एक रेडक्स कफ्याक्टर र एक पोलिफेनोलिक यौगिक हो जुन प्राय: खाना बोटहरूमा पाइन्छ। यो कोषहरूको साइटोप्लाज्ममा फेला पर्दछ र कम प्रतिक्रियाहरू र ऑक्सीकरणको साथ मद्दत गर्दछ।
क्विनाइन एक कड़वा मिश्रण हो जुन सिनकोना रूखको बोक्राबाट आउँदछ। रूख प्राय: दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, क्यारिबियन टापुहरू र अफ्रिकाको पश्चिमी तटको केही भागहरूमा पाइन्छ। क्विनाइन मौलिक मलेरियासँग लड्न औषधीको रूपमा विकसित गरिएको थियो।
एक पूर्व योग्यता प्रश्नावली (PQQ, कहिलेकाँहि आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन प्रश्नावली भनेर चिनिन्छ) सम्भावित टेन्डरहरु लाई उनीहरूको अनुभव, क्षमता र वित्तीय स्थिति को बारे मा उत्तर को लागी प्रश्नहरुको एक श्रृंखला सेट गर्दछ।
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) एक पानी-घुलनशील क्विनोन कम्पाउन्ड हो जुनसँग बलियो एन्टी-ऑक्सीडन्ट क्षमता छ। मुसाको अघिल्लो अध्ययनले पीक्यूक्यू-डिलेटेड डाईटले देखायो कि पीक्यूक्यू पूरक पछि सीरम ट्राइग्लिसराइड (TG) को उन्नत स्तर घट्यो।
हालसम्म गरिएको अनुसन्धानले स्थापित गरेको छ कि PQQ शरीर द्वारा राम्रोसँग सहन गरिन्छ जब निर्धारित सीमा भित्र लिईन्छ। यद्यपि, निर्धारित खुराक भन्दा बढी साइड-इफेक्ट्स हुन सक्छ, जस्तै टाउको दुख्ने, थकान, र तन्द्रा। तसर्थ, प्रयोगकर्ताहरुलाई सल्लाह दिइएको छ सुरक्षित day० मिलीग्राम प्रति दिन खुराक र mg० मिलीग्राम खुराक भन्दा पर नलिन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पीक्यूक्यु शरीरले राम्रोसँग सहन योग्यको रूपमा परिचित छ, यद्यपि तपाईंसँग पहिले देखि नै रहेको अवस्था छ भने यसको सेवन सुरु गर्नु अघि डाक्टरको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ।
CoQ10 एक सुपरचार्जर जस्तै हो जुन ट्रेनको गतिलाई सुधार गर्दछ। PQQ एक निर्माण कम्पनी जस्तै हो जुन सँधै तपाईंको ट्रेनमा थप कारहरू थप्ने काम गर्दछ। सारांशमा, CoQ10 ले तपाईंको उर्जा उत्पादन ट्रेनको गति सुधार गर्दछ, जबकि PQQ ले तपाईंको ट्रेनमा थप क्षमता थप्दै र निर्माण गर्दैछ।
CoQ10 को स्थापना गरिएको आदर्श खुराक छैन। अध्ययनले वयस्कहरूमा mill० मिलिग्रामदेखि १,२०० मिलीग्राम सम्म CoQ10 को खुराक प्रयोग गरेको छ, कहिलेकाँही एक दिनको अवधिमा धेरै मात्रामा विभाजन हुन्छ। सामान्य दैनिक खुराक १०० मिलीग्रामदेखि २०० मिलिग्राम हुन्छ।
एन्टिकोआगुलेन्टहरू। CoQ10 ले रक्त-पातलो औषधि बनाउँदछ, जस्तै warfarin (Jantoven), कम प्रभावी। यसले रगत थक्काको जोखिम बढाउन सक्छ।
जब, तब क्यू १० रगतबाट कोशिका र ऊतहरूमा जान्छ, फेरि यसलाई जैव-ऊर्जावान रूप, युबिक्विनमा रूपान्तरण गरिन्छ। Q10 को ubiquinol फारम अस्थिर छ र यसको फलस्वरूप Q10 क्याप्सुल निर्मातासँग काम गर्न धेरै महँगो छ।
युबिक्विनोल रगत रगत प्लाज्मामा पुनर्स्थापित हुन थाल्दा, धेरै व्यक्तिहरूले पूरक सुरु गरेपछि पाँचौं दिनमा थकानको कम संकेतहरू देख्नुपर्दछ। सामान्यतया दुईदेखि तीन हप्ता भित्रमा, तपाईंको शरीरको युबिकिनोलको मात्रा इष्टतम स्तरमा पुग्छ, र धेरैले यस समयमा ऊर्जामा भिन्नता महसुस गर्नेछन्।
CoQ10 पूरकहरू सुरक्षित देखिन्छन् र केही साइड इफेक्टहरू उत्पादन गर्नका लागि जब निर्देशनको रूपमा लिइन्छ।
हल्का साइड इफेक्टले पाचन समस्याहरू समावेश गर्न सक्छ जस्तै:
माथिल्लो पेट दुख्ने
अन्य सम्भावित साइड इफेक्टहरूमा समावेश हुन सक्छ:
टाउको दुख्ने र चक्कर
छाला खुजली वा चकत्ते
चिड़चिड़ापन वा आन्दोलन
गर्भावस्था र स्तनपानको समयमा CoQ10 को उपयोगको सुरक्षा स्थापित गरिएको छैन। CoQ10 प्रयोग नगर्नुहोस् यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा तपाईंको डाक्टरको स्वीकृति बिना स्तनपान गराउनुहुन्छ।
पायरोलोक्विनोलिन कुन्निन, जसलाई पीक्यूक्यू पनि भनिन्छ, एक रेडक्स कोफेक्टोर हो र एक पोलिफेनोलिक कम्पाउन्ड प्राय: खाना बोटहरूमा पाइन्छ। PQQ सेलुलर उर्जा उत्पादन र माइटोकन्ड्रियल स्वास्थ्यलाई सहयोग पुर्‍याउन र शरीरलाई ऑक्सीडेटिव तनावबाट बचाउन आहार पूरकको रूपमा खपत गर्न सकिन्छ।
शक्तिशाली पोषक PQQ हार्ट विफलता रोक्न सक्छ। कार्डियोवास्कुलर डायग्नोसिस एण्ड थेरापीको नयाँ संस्करणमा प्रकाशित नयाँ ब्रिटिश क्लिनिकल रिसर्च, निष्कर्षमा पुग्दछ कि आवश्यक पोषक पाइरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) ले पुरानो हृदय असफलता (CHF) को रोकथाममा भूमिका खेल्न सक्छ।
हाम्रो परिणामहरूले सुझाव दिन्छ कि PQQ को साथ पूरक, विशेष गरी गर्भावस्था र स्तनपान गराउँदा, सन्तानलाई WD- प्रेरित विकासात्मक कार्यक्रमबाट हेपाटिक lipotoxicity बाट बचाउँछ र अर्को पुस्तामा NAFLD को अग्रिम महामारीलाई ढिलो गर्न मद्दत गर्दछ।
PQQ का यी एन्टि-डायबेटिक प्रभावहरू यसको एन्टिऑक्सिडेटिभ गुणहरू द्वारा समर्थित थियो, किनकि PQQ ले न केवल टिश्यु LPO लाई इन्भेर्मित गर्‍यो तर सीरम इन्सुलिन र HDL, साथै सेलुलर एन्टिऑक्सिडन्टहरू पनि बढायो।
तपाईंको Mitochondria बढाउने 10 तरिकाहरू
कम क्यालोरी खान्नुहोस्।
PQQ सप्लीमेन्ट लिदै।
परिष्कृत कार्ब्स जस्तै सोडा, सेतो रोटी र पेस्ट्रीहरू फाल्नुहोस्।
गुणस्तरीय प्रोटीन जस्तो घाँस खानु गोमांस र चरा-उठाएको अण्डा खानुहोस्
हरेक रात hours घण्टा निद्रा प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिनुहोस्।
विश्राम प्रविधिको साथ तनाव कम गर्नुहोस् जस्तै ध्यान वा मसाज दैनिक।
तातो उपचारको प्रयास गर्नुहोस्।
दैनिक कम्तिमा minutes० मिनेट गतिविधि प्राप्त गर्नुहोस्।
डार्क चकलेट जस्तो रेसिभेट्रोलको साथ एन्टिआक्सीडन्ट युक्त खाद्य पदार्थहरू खान्नुहोस्।
ओमेगा ss र अल्फा- lipoic एसिड को स्रोतहरु।
पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) एक उपन्यास रेडक्स कोफेक्टर हो जुन भर्खरै मानव दुधमा फेला पर्‍यो। PQQ एक प्रभावी एन्टिआक्सीडन्ट थियो मिटोकोन्ड्रियालाई अक्सिडेटिभ तनाव-प्रेरित लिपिड पेरोक्सिडेशन, प्रोटीन कार्बोनिल गठन र माइटोकोन्ड्रियल श्वसन श्रृंखलाको निष्क्रियता विरुद्ध।
PQQ एक प्राकृतिक यौगिक हो जुन विभिन्न खानेकुरामा पाइन्छ। यो एक antioxidant को रूप मा कार्य गर्दछ र स्वस्थ mitochondrial समारोह समर्थन गर्दछ। मस्तिष्कको कार्यलाई बढावा दिन यो पूरकको रूपमा लिइएको छ।
पाइरोलोक्विनोलिन क्विनोन वा PQQ भर्खरको पत्ता लगाइएको भिटामिन जस्तो कम्पाउन्ड हो जुन प्राय: बोटको खानामा पाइन्छ। यो पहिले ब्याक्टेरियाहरूका लागि कोफेक्टरको रूपमा पत्ता लागेको थियो जुन बी भिटामिनले मानिसहरूलाई कसरी असर गर्छ। PQQ सँग एन्टीआक्सीडन्ट र B-भिटामिन-जस्तो गतिविधि छ, मस्तिष्क र शरीरको लागि विस्तृत लाभहरूको साथ।
तपाई सायद एक सानो PQQ हरेक दिन खान सक्नुहुन्छ। यो पालक, हरियो मिर्च, किउफ्रुट, टोफू, नाट्टो (किण्वित सोयाबीन), हरियो चिया, र मानव दुध जस्तै धेरै खाद्य पदार्थहरूमा थोरै मात्रामा फेला पर्दछ। जहाँसम्म, हामी सामान्य रूपमा खानाबाट धेरै PQQ प्राप्त गर्दैनौं - प्रति दिन केवल १.० देखि १.० मिलीग्राम (मिलीग्राम) अनुमानित।
यी मुख्य पोषकहरूमध्ये केहीमा एल-कार्निटाइन र क्रिएटिन पनि समावेश छ जुन दुबै मिटोकोन्ड्रियामा ऊर्जा आपूर्ति गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले दुबै चीज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ घाँस खानु गोमांस, बाइसन, अण्डा, कुखुरा, सिमी, नट, र बीउहरू आफ्नो आहारमा थपेर।
अध्ययनले पत्ता लगायो कि उपवासले पेरोक्सिसमहरूसँग मिटोकोन्ड्रियल समन्वय बढाउँदछ, अर्गेनेलको एक प्रकार जसले फ्याटी एसिड ऑक्सीकरण, मौलिक फ्याट मेटाबोलिजम प्रक्रिया बढाउन सक्दछ।
एउटा नयाँ अध्ययनले पत्ता लगायो कि व्यायाम - र विशेष गरी उच्च-तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण एयरोबिक व्यायामहरू जस्तै बाइकि and र हिड्ने - कोशिकाले उनीहरूको उर्जा उत्पादन गर्ने मिटोकोन्ड्रिया र उनीहरूको प्रोटीन-निर्माण राइबोसोमहरूको लागि अधिक प्रोटीन बनायो जसले सेलुलर स्तरमा बुढेसकाललाई प्रभावकारी रूपमा रोक्दछ। ।
यो निर्धारित गरिएको छ कि क्षतिको प्रतिकार गर्न मिटोकोन्ड्रियाले राम्रोसँग परिभाषित मर्मत मार्गहरू न्यूक्लियससँग मिल्दोजुल्दो छ, जसमध्ये यी हुन्: बेस एक्सेज मर्मत (बीईआर), बेमेल मर्मत (एमएमआर), एकल स्ट्रान ब्रेक मर्मत (एसएसबीआर), माइक्रोहोलॉजी-मध्यस्थता समाप्त जोर्नी (MMEJ), र सम्भवतः homology पुनः संयोजकत्व।
मौखिक प्राकृतिक पूरक झिल्लीहरू फास्फोलिपिड्स, CoQ10, माइक्रोएन्क্যাপसुलेटेड NADH, l-carnitine, α-lipoic एसिड, र अन्य पौष्टिक तत्त्वहरूले माइटोकोन्ड्रियल समारोह पुनर्स्थापित गर्न र पुराना बिमारका बिरामीहरूमा जटिल थकान कम गर्न मद्दत गर्दछ।
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) प्रयोग गर्दछ
पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) सुरुमा भिटामिन मानिन्थ्यो। यद्यपि थप अनुसन्धानले यसलाई नन-भिटामिन कम्पाउन्डको रूपमा स्थापित गर्‍यो जुन दुबै खानाको साथै स्तनपायी टिशूहरूमा पनि देखा पर्दछ। यद्यपि यो हाइलाइट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यद्यपि कुनै अनुसन्धानले यसको स्तनपायी संश्लेषण प्रमाणित गरिसकेको छैन, लगभग १०--100०० नानोग्राम पीक्यूक्यु मानव शरीरमा हरेक दिन गठन हुन्छ। दुर्भाग्यवस, यो राशि PQQ प्रदर्शन गर्नका लागि विभिन्न प्रकार्यहरू समर्थन गर्नको लागि पर्याप्त छैन। यसैले, मानिसहरुलाई प्राय: पोष्टिकुलीय पूरकको रुपमा PQQ सेवन गर्न सल्लाह दिइन्छ।
PQQ मा खानाको अभावले न केवल बढ्दो विकासमा लैजान्छ, तर यौन कार्य पनि कम गर्दछ। त्यस्तै, धेरै अध्ययनहरूले PQQ लाई ग्रोथ कारक र माइटोकन्ड्रियल बायोजेनेसिससँग जोडेका छन्। सरल शब्दहरुमा, मानव शरीर PQQ बाट फाइदा लिन सक्छ किनकि यसले mitochondria को संख्या र काम लाई बढावा दिन्छ, जसले गर्दा उर्जाको स्तर अझ राम्रो हुन्छ। PQQ एक उत्कृष्ट REDOX एजेन्ट को रूपमा पनि जानिन्छ र आत्म-ऑक्सीकरण र पोलीमराइजेसन रोक्छ।
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) लाभहरू
विगत केही वर्षहरूमा पिरोलोक़ुइनोलिन क्विनोनमा चासो बढेको छ किनकि यस क्षेत्रलाई धेरै फाइदाहरूका साथ जोडिएको छ। यहाँ हामी यसको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पाइरोरोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) फाइदाहरू हेर्छौं।
① PQQ सुधारिएको सम्पूर्ण समग्र उर्जासँग जोडिएको छ
माइटोकन्ड्रिया सानो अंगेलिजहरू हुन् जुन कोशिकाभित्र अवस्थित हुन्छन् र प्रायः सेल पावरहाउस भनेर चिनिन्छ जब तिनीहरूले खानाबाट उर्जा निकाल्दछन्, जसले गर्दा कोषहरूले आफ्नो कार्य गर्न आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। पाइरोलोक्विनोलिन क्विनोनले माइटोकन्ड्रियालाई अझ राम्रोसँग काम गर्न अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा कोषहरू भित्र ऊर्जा उत्पादन बढ्छ। कोषहरू भित्र बढेको उर्जाले अन्तत: सम्पूर्ण शरीरमा आफ्नो बाटो फेला पार्दछ, फलस्वरूप अधिक क्षमता र समग्र उर्जा निम्त्याउँछ। यदि तपाईं अक्सर सुस्त वा कम ऊर्जा अनुभव गर्नुहुन्छ भने, PQQ सप्लीमेन्टहरूले तपाईंलाई तपाईंको उर्जाको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ। (१) प्रकाशित: Pyrroloquinoline Quinone को प्रभाव (PQQ)
② यसले नर्व ग्रोथ फ्याक्टरहरूलाई सुधार गर्दछ
Pyrroloquinoline Quinone सेलुलर मार्गको साथ अन्तर्क्रिया गर्दछ र प्रक्रियामा, सकरात्मक सकारात्मक तंत्रिका विकास कारकहरूलाई प्रभाव पार्दछ। यसको फलस्वरूप, क्रैनियल टिश्युमा न्युरोनल कोषहरू र स्नायुहरूको बृद्धि हुन्छ। यसैले, PQQ अक्सर सुधारिएको दिमाग समारोहसँग जोडिएको हुन्छ। NGF dysregulation अक्सर अल्जाइमर रोगको साथ जोडिएको हुनाले PQQ सप्लीमेन्टहरू प्राय: उमेर सम्बन्धी सर्तहरूको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन सुझाव दिइन्छ।
③PQQ इन्टेक सुधारिएको स्लीपसँग जोडियो
एउटा अध्ययनले मानिस निद्रामा PQQ सेवनको प्रभावको विश्लेषण गर्‍यो। अध्ययनले आठ हप्ताको अवधिमा सहभागीहरूको विश्लेषण गर्‍यो र पत्ता लगायो कि जसले आठ हप्ता नियमित तवरले खान्छन् उनीहरू अझ राम्ररी सुत्न सक्षम थिए। अध्ययनले यो कुरा पनि पत्ता लगायो कि पीक्यूक्यू सेवनले कोर्टिसोल कम गर्दछ, तनाव हर्मोन जसले सामान्य निन्द्रामा अवरोध गर्दछ। यद्यपि यस क्षेत्रमा विशेष रूपमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानले स्पष्ट रूपमा PQQ सेवनलाई सुधारिएको निद्रासँग जोड्दछ।
④ PQQ ऑक्सीडेटिव तनाव कम गरी समग्र कल्याणको प्रचार गर्दछ
पीक्यूक्यू यसको उच्च एन्टी-ऑक्सीडन्ट गुणहरूको लागि परिचित छ - यसले शरीरमा सी-रिएक्टिव प्रोटीन र आईएल-and को स्तर घटाउँछ, जो दुबैलाई जलनको लागि जिम्मेवार छ। यसको अक्सिडेटिभ गुणहरूले PQQ लाई अक्सिडेटिभ तनावको बिरूद्ध प्रभावकारी लडाकू पनि बनाउँछ जुन कार्सिनोमास र न्यूरोडोजेरेटिव रोग जस्ता धेरै पुरानो रोगहरूको सामान्य कारण हो। PQQ ले फ्रि रेडिकलहरूको कारण हुने ऑक्सीडेटिव क्षतिको कम र मेटाबोलिज्मलाई बढाउँदै तनाव कम गर्दछ।
Co CoQ10 सँग संयोजनमा PQQ मेमोरी प्रकार्य सुधार गर्दछ
पीक्यूक्यू सेवन कम तनावको साथ जोडीएको छ, जसले परिणामस्वरूप बृद्धि भएको संज्ञानात्मक समारोह र मेमोरीमा सुधार गर्दछ। PQQ मेमोरीमा कसरी असर गर्छ भनेर अध्ययन गर्न अनुसन्धान अध्ययनहरू सञ्चालन गरिएको छ। एउटा अनुसन्धान अध्ययनले पत्ता लगायो कि PQQ Co Co10, कोएन्जाइमको साथ मिलेर काम गर्दछ जसले एन्टिऑक्सिडन्टको रूपमा काम गर्दछ जसले मेटाबोलिजमलाई बढावा दिन्छ र कोषहरूलाई क्षतिबाट बचाउँछ। CoQ10 सँग संयोजनमा PQQ मेमोरी प्रकार्य सुधार गर्न देखाउँदछ।
P PQQ का अन्य फाइदाहरू
माथि र माथि उल्लिखित लाभहरू माथि, PQQ ले केहि अन्य फाइदाहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन हाल अनुसन्धान भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, प्रारम्भिक अनुसन्धानले प्रमाणित गर्यो कि PQQ सेवनले प्रजनन क्षमतामा सुधार गर्दछ।
यदि तपाई एक स्वास्थ्य पूरक निर्माता हुनुहुन्छ जुन ठूलो मात्रामा पाइरोरोक्विनोलिन क्विनोनको निर्माणमा संलग्न छ, यो स्पष्ट छ कि तपाईले कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता खोजिरहनु पर्छ जुन तपाईलाई थोकमा PQQ पाउडर प्रदान गर्न सक्दछ। एक आपूर्तिकर्ता खोज्नुहोस् जसले गुणवत्ता र विश्वसनीयताका लागि विश्वास गर्न सकिन्छ एक सफल व्यवसाय स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण छ।
तपाईं देख रहे भने Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) किन्नुहोस् पाउडर बल्क मा, किनमेल गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ Cofttek हो। कफ्टटेक एक उच्च-टेक फार्मास्यूटिकल बायोकेमिकल उद्यम हो जुन २०० 2008 मा स्थापना भएको हो र "क्वालिटी बेसिस, कस्टमर फर्स्ट, इमान्दार सेवा, म्युचुअल बेनिफिट" को सिद्धान्तमा संचालन हुन्छ। कम्पनी उत्तम परीक्षणको लागि प्रतिबद्ध छ, जसले यसलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई उच्च-गुणवत्ता सेवाहरू र उत्पादनहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। कफटेकले हाल चीन, युरोप, भारत र उत्तर अमेरिकामा औषधी कम्पनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनहरू आपूर्ति गर्दछ। कम्पनी द्वारा आपूर्ति गरिएको PQQ पाउडर २ kil किलोग्रामको ब्याचमा आउँछ, जुन तपाईको उत्पादनको बहु ब्याचहरू उत्पादन गर्न पर्याप्त छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कफटेकसँग अनुभवी ब्यबश्थापन टोली र एक प्रथम श्रेणी आर एंड डी टीम छ। तपाईं, त्यसैले, आराम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं निश्चित समयमा फेसनमा अविश्वसनीय रूपमा उच्च गुणवत्ताको उत्पादनहरूका सबै डेलिभरीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं थोरैमा Pyrroloquinoline Quinone किन्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, cofttek सेवामा टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
(१) प्रकाशित:पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (PQQ) को पूरक एरोबिक व्यायाम प्रदर्शनमा र अप्रशोधित पुरुषहरूमा माइटोकन्ड्रियल बायोजेनेसिसको सूचिकरण।
(२) पायरोलोक्विनोलिन क्विनोनको न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव ट्रामाटिक दिमागमा चोट लागेको छ।
()) Pyrroloquinoline quinone को स्वास्थ्य लाभहरु मा अध्ययन मा हालसालै प्रगति
()) एन्टिऑक्सिडन्ट पूरक पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन डिसोडियम साल्ट (BioPQQ ™) संज्ञानात्मक कार्यहरूमा प्रभाव
(5) पाइरोलोक्विनोलिन क्विनोन
(13) फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) लिनका शीर्ष benefits लाभहरू।
म pqq मन पराउँछु। मैले यसलाई लगभग २ बर्षको लागि प्रयोग गरिरहेको छु। मेरो लागि यसले उर्जालाई बढावा दिन्छ। एक उत्तेजक तरिकामा होईन तर केवल मानसिक प्रसंस्करण र शारीरिक उर्जामा सामान्य बूस्टिंग। म यसलाई दैनिक १० वा २० मिलीग्राम w १००mg ubiquinol प्रयोग गर्दछु। म यो सिफारिस गर्दछु।
म एक दिन 40० मिलीग्राम लिन्छु। मेरो उर्जा दिनभरि संगठित छ, र मलाई लाग्छ यसले मेरो महान गुणको निद्रामा अश्वगंधा, म्याग्नीशियम, र l-theanine सँग योगदान गर्दछ।
पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको थियो कसरी एउटा फ्लोक्सिingबाट निको पार्ने बारेमा। यसले नयाँ माइटोकन्ड्रियाको बायोजेनेसिसलाई उत्तेजित गर्छ र सेल मर्मतका लागि CoQ10 का साथ synergizes। मैले ऊर्जा र कहिलेकाँही मुडमा ठूलो भिन्नता देख्छु जब म यो लिन्छु।